Home - National Centre for English Language (NCEL)
WELCOME TO NATIONAL CENTER FOR ENGLISH LANGUAGE
Established on 23 December 2004 under the Department of Higher Education, Ministry of Education, Myanmarhoused at Pang Long Hall, located on Yangon University Campus, next to Judson Church
To fulfil the English language skills requirements ofalifelong learning Myanmar society
To promote the teaching and learning of English at all levels focusing on the tertiary level through human resource development, education, training, research and linkages with regional and international ELT organizations
Results for Global English Course (1/2018)
Get Initial Consultation, Call to us
Global English Course အကြောင်းနှင့်ပတ်သက်သည့်အမေးအဖြေ
Global English Course အကြောင်း
Global English Course က ဘယ်လိုသင်တန်းမျိုးလဲ။
Global English Course က ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာသင်တန်းဖြစ်ပါတယ်။ Level ၅ ခုတက်ရပါမယ်။ Basic Level, Intermediate Level, Upper Intermediate Level, Advanced Level I, Advanced Level II တို့ဖြစ်ပါတယ်။ Level တစ်ခုစီကို (၁၂)ပတ်ကြာမြင့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Level (၅)ခုလုံး ပြီးသွားရင် Diploma in English ကိုချီးမြှင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ သင်တန်းတစ်ခုလုံးပြီးဖို့ (၁)နှစ်ခွဲမှ (၂) နှစ်အတွင်း ကြာမြင့်ပါမယ်။ ယခုလက်ရှိသင်တန်းကြေးက Level တစ်ခုစီအတွက် ကျပ် ၅၀ဝဝဝ (ငါးသောင်းကျပ်) ဖြစ်ပါတယ်။
Level တစ်ခုတက်ပြီးရင် အောင်လက်မှတ်ထုတ်ပေးပါသလား။
မပေးပါ။ ထောက်ခံစာလိုချင်သူများကို ထောက်ခံစာထုတ်ပေးပါတယ်။
Basic Level က စတက်ရမှာလား။ ကြားဖြတ်ပြီး Intermediate, Upper Intermediate တို့က စတက်လို့ရပါသလား။
မရပါဘူး။ ကျောင်းသားအားလုံးက Basic Level စတက်ရမှာပါ။
Basic Level တက်ဖို့ စာမေးပွဲဖြေဆိုရပါသလား။
မဖြေဆိုရပါ။ Online မှာ လျှောက်လွှာတင်ပြီးသွားရင် တက်ရောက်ခွင့်ရသူများကို Online မှာ ကြေငြာပေးပါမယ်။
သင်တန်းတက်ရောက်နိုင်တဲ့အချိန် (၃)ချိန်ရှိပါတယ်။ မိမိတက်လိုတဲ့ အချိန်ကို ရွေးချယ်ပြီး လျှောက်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Weekday (WD) – တနင်္လာ၊ ဗုဒ္ဓဟူး၊ သောကြာ (နံနက် ရးဝဝနာရီမှ ၉းဝဝနာရီ)
Weekend (WE 1) – စနေ၊ တနင်္ဂနွေ၊ (နံနက် ၉းဝဝနာရီမှ ၁၂းဝဝနာရီ)
Weekend (WE 2) – စနေ၊ တနင်္ဂနွေ (နေ့လည် ၁းဝဝနာရီမှ ၄းဝဝနာရီ)
Global English Course သင်တန်းတက်ပြီး ခေတ္တနားထားသောကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ ဘယ်လိုကျောင်းအပ်ရပါသလဲ။ Online ကလျှောက်ရမှာလား။
ကျောင်းသားဟောင်းတွေဆိုရင် Online က လျှောက်ဖို့မလိုပါဘူး။ မိမိရပ်နားထားတဲ့ Level နှစ်၊ လ တို့ကို ပြောပြီး မိမိကျောင်းသားကဒ်ကိုပြပြီး ကျောင်းပြန်တက်လို့ ရပါတယ်။
Online မှ လျှောက်ထားမှု
Online မှ လျှောက်ထားရမယ့်ရက်ကို ဘယ်လိုသိနိုင်ပါသလဲ။
Online မှလျှောက်ထားရမယ့်ရက်ကို ကြေးမုံသတင်းစာ၊ National Centre for English Language ရဲ Facebook page နဲ့ NCEL ရဲ့ Webpage ဖြစ်တဲ့ https://register.ncel.edu.mm မှာ ကြေငြာပေးပါတယ်။ လျှောက်လွှာကို သတ်မှတ်တဲ့ရက်၊ သတ်မှတ်တဲ့အချိန်မှာပဲ လျှောက်ရပါမယ်။ ကြိုတင်လျှောက်ထားလို့မရပါဘူး။ လျှောက်ထားရမယ့်အချိန်ကျမှသာလျှင် https://register.ncel.edu.mm မှာ Register လုပ်လို့ရပါမယ်။
ကိုယ်တက်ချင်တဲ့အချိန်တွေကို Online မှာ လျှောက်တဲ့အခါ ဘယ်လိုရွေးရပါမလဲ။
Online မှာ လျှောက်လွှာတင်ဖို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်၊ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အချိန်မှာ Register လုပ်တဲ့ Icon ပေါ်လာမှာပါ။ အဲဒီအခါ Register ကို နှိပ်လိုက်ရင် Online မှ လျှောက်ရမယ့် ပုံစံပေါ်လာပါမယ်။ အဲဒီထဲမှာ WD, WE 1, WE2ဆိုပြီး ရွေးချယ်စရာ (၃)ခုကို ရွေးရမယ့် Button ကတဆင့် ရွေးချယ်လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။
Online မှာ WD ကို လျှောက်မိပြီး WE 1 (သို့) WE2အတန်းတွေကို ပြောင်းပြီး ကျောင်းအပ်လို့ ရပါသလား။
Online မှ ရွေးထားပြီးဖြစ်တဲ့ Session ကို ကျောင်းအပ်တဲ့အခါ ပြောင်းအပ်လို့မရပါဘူး။ ဒါကြောင့် လျှောက်ထားရာမှာ WD, WE 1, WE2တို့ကို သေချာရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
Online လုပ်တဲ့အခါ Form ဖြည့်ရာမှာ ဘာတွေဖြည့်ရမလဲ။
Form ဖြည့်ရာမှာ အမည်၊ အဖအမည်၊ မှတ်ပုံတင်၊ မွေးသက္ကရာဇ်၊ အလုပ်အကိုင်၊ နေရပ်လိပ်စာ၊ အီးမေးလ် လိပ်စာ၊ ဘွဲ့အမည်တို့ကို ဖြည့်ရပါမယ်။
Form ကို အင်္ဂလိပ်လိုဖြည့်ရမှာလား၊ မြန်မာလိုဖြည့်ရမှာလား။
Form ပါ အချက်အလက်အားလုံးကို အင်္ဂလိပ်လိုပဲ ဖြည့်ရမှာပါ။
Basic Level တစ်သုတ်ကို ကျောင်းသား ဘယ်နှစ်ယောက် လက်ခံပါသလဲ။
Basic Level ကျောင်းသားလက်ခံရာမှာ လူဦးရေက တသမတ်တည်းမရှိပါဘူး။ လက်ရှိ Intermediate, Upper Intermediate , Advanced Level I, Advanced Level II တက်နေတဲ့ ကျောင်းသားဦးရေကို တွက်ဆပြီးမှ ဆရာလုံလောက်မှု၊ အခန်းလုံလောက်မှုအရ လက်ခံတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ Global English Course (2/2019) မှာတော့ (၄၀ဝ) ကျော် လက်ခံခဲ့ပါတယ်။
Basic Level ဆိုရင်တော့ လူကိုယ်တိုင်လာရပါမယ်။ အခြား Level တွေဆိုရင်တော့ ကျောင်းအပ်ရာမှာ လိုအပ်တဲ့အချက်အလက်အပြည့်အစုံပါရင် လူစားအပ်လို့လည်းရပါတယ်။
ကျောင်းအပ်တဲ့အခါ ဘာအချက်အလက် အထောက်အထားတွေလိုမလဲ။
ကျောင်းအပ်တဲ့အခါ လိုအပ်တဲ့အချက်အလက်တွေကတော့ ဘွဲ့လက်မှတ်မူရင်းနှင့် မိတ္တူ၊ မှတ်ပုံတင်၊ ဓါတ်ပုံ (၄)ပုံ ဖြစ်ပြီး ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါက ဝန်ထမ်းကဒ် မူရင်းနှင့် မိတ္တူ၊ သက်ဆိုင်ရာ ကျောင်း၊ ရုံး၊ ဌာနမှ တာဝန်ခံ အကြီးအကဲ၏ သင်တန်းတက်ရောက်ခွင့်ပြုစာ တို့ဖြစ်ပါတယ်။
Online မှာ လျှောက်တဲ့အခါ ကျောင်းသားတွေကို ဘယ်လိုရွေးချယ် ကျောင်းအပ်လက်ခံပေး ပါသလဲ။
Online မှာ ရောက်ရှိလာတဲ့ Form တွေကို အချကအလက်ပြည့်စုံပြီး အစောဆုံးရောက်တဲ့ Form တွေကို အစီအစဉ် အတိုင်းလက်ခံပါတယ်။ တက်ရောက်ခွင့်ပြုနိုင်တဲ့ ကျောင်းသားအရေ အတွက်ကို လျှောက်လွှာပိတ်ပြီး (၂)ရက်၊ (၃)ရက် ကြာရင် Online မှာပဲ ထုတ်ပြန်ကြေငြာပြီး ကျောင်းအပ်စေပါတယ်။ ကျောင်းအပ်တဲ့နေ့ ညနေပိုင်းမှာပဲ ကျောင်းလာအပ်တဲ့ ဦးရေပေါ်မူတည်ပြီး Waiting List ကို တပါတည်းကြေငြာပေးပါတယ်။
Online မှာ လျှောက်လွှာကို ဘယ်နှစ်မိနစ်လောက်ကြာအောင် တင်ခွင့်ပေးပါသလဲ။
လက်ခံနိုင်တဲ့ ကျောင်းသားဦးရေပေါ်မှာ မူတည်ပြီး (၁၀)မိနစ် (၁၅)မိနစ်လောက်ဖွင့်ပြီးရင် form ပြန် ပိတ်ပါတယ်။ တစ်စက္ကန့်မှာ လျှောက်လွှာ (၃၊ ၄)ခုလောက်ဝင်တာကြောင့် (၁၅)မိနစ်ဆိုရင် လျှောက်လွှာ (၅၀ဝဝ) ကျော် (၆၀ဝဝ)လောက်ဝင်နေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အင်တာနက် လိုင်းကြပ်တဲ့အတွက် လျှောက်လွှာတင်လို့မရတာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ လျှောက်လွှာတင်နိုင်ဖို့ အင်တာနက်လိုင်း ကောင်းဖို့တော့လိုပါတယ်။
Online မှာ Formတင်ပြီး Sent လုပ်ပြီးရင် ကျောင်းအပ်လို့ရပြီလား။
မရသေးပါဘူး။ Sent လုပ်ပြီးပေမယ့် ကိုယ်ရဲ့ Serial No. က သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဦးရေထဲဝင်မှ ကျောင်းအပ်လို့ရပါမယ်။ ဥပမာ မိမိရဲ့ Online မှာ တင်လိုက်တဲ့ Form ရဲ့ WD Serial No. က (၁၅၁) ဆိုပေမယ့် WD တန်းတွေမှာ လက်ခံနိုင်တဲ့ ဦးရေက (၁၅၀) ဆိုရင် ကျောင်းအပ်ခွင့်ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
Global English Course စည်းကမ်းချက်များ
သင်တန်းသူ/သားများသည် အောက်ဖော်ပြပါ စည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာရမည်။ လိုက်နာခြင်းမရှိပါက သင်တန်းတက်ခွင့်ရပ်ဆိုင်းမည်။
Global English Course (1/2020)
Global English Course (1/2020) Basic Level တက်ရောက်လိုသည့် သင်တန်းသူ / သားအသစ်များသည် ၈.၁၂.၂၀၁၉ ရင်နေ့ (တနင်္ဂနွေနေ့) နံနက် ၀၉း၀၀ နာရီတွင် အောက်ဖော်ပြပါ website link ၌ ဝင်ခွင့်ပုံစံဖြည့်စွက် လျှောက်ထာနိုင်ပါသည်။
Global English Course (3/2019)
Global English Course (3/2019) Basic Level တက်ရောက်လိုသည့် သင်တန်းသူ / သားအသစ်များသည် ၂၅.၈.၂၀၁၉ ရင်နေ့ (တနင်္ဂနွေနေ့) နံနက် ၀၉း၀၀ နာရီတွင် အောက်ဖော်ပြပါ website link ၌ ဝင်ခွင့်ပုံစံဖြည့်စွက် လျှောက်ထာနိုင်ပါသည်။